အချစ်ရေး – Alanzayar
ရည်းစားဟောင်းကိုမကြေနပ်လို့ တဈသက်လုံးစာ အရွက်ရေအာင်လုပ်ခဲ့တဲ့ကောင်လေး
ရည်းစားဟောင်းကိုမကြေနပ်လို့ တဈသက်လုံးစာ အရွက်ရေအာင်လုပ်ခဲ့တဲ့ကောင်လေး အပြည့်အစုံကို အောက်တွင် ရုပ်သံဖိုင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ခရက်ဒဈ ဗွီဒီယို ရည်းစားဟောင်းကိုမကြေနပ်လို့ တဈသက်လုံးစာ အရွက်ရေအာင်လုပ်ခဲ့တဲ့ကောင်လေး အပြည့်အစုံကို အောက်တွင် ရုပ်သံဖိုင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ခရက်ဒဈ ဗွီဒီယို ရည်းစားဟောင်းကိုမကြေနပ်လို့ တဈသက်လုံးစာ အရွက်ရေအာင်လုပ်ခဲ့တဲ့ကောင်လေး အပြည့်အစုံကို အောက်တွင် ရုပ်သံဖိုင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ခရက်ဒဈ ဗွီဒီယို ရည်းစားဟောင်းကိုမကြေနပ်လို့ တဈသက်လုံးစာ အရွက်ရေအာင်လုပ်ခဲ့တဲ့ကောင်လေး …
အချစ်ရဲ့ ဒုက္ခကို ကောင်းကောင်းကြီးသိသွားတဲ့ ဆရာမ တစ်ယောက်ရဲ့ အဖြစ်…
အချစ်ရဲ့ ဒုက္ခကို ကောင်းကောင်းကြီးသိသွားတဲ့ ဆရာမ တစ်ယောက်ရဲ့ အဖြစ်… ထိုင်ဝမ်မှာ အမျိုးသမီးကြီး တစ်ဦးရှိပါတယ်။သူဟာ ကျောင်းဆရာမတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။အရွယ်ကောင်းတုန်းမှာပဲ ယောက်ျားဆုံးပါးသွားပါတယ်။ငယ်ရွယ်တဲ့ သားလေးတစ်ယောက် ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။ သားလေးကို ဘထွေးနဲ့ မကြုံစေချင်လို့နောင်အိမ်ထောင်ထပ်မပြုပဲ အမေတစ်ခုသားတစ်ခုနဲ့ ပဲ သားလေးကို ပျိုးထောင်လာခဲ့ပါတယ်။သားလေးလည်း အလွန်လိမ္မာပါတယ်။အမေ့ကိုလည်း အလွန်သိတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဆရာမဝင်ငွေငွေလေးနဲ့ သားလေးကိုရှိစုမဲ့စု ပျိုးထောင်လာခဲ့ပါတယ်။သားကလည်း ထူးချွန်တာမို့ အမေရိကန်နိုင်ငံကိုပညာတော်သင် စေလွတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကမှာ …
မိန်းကလေးတွေ မကြိုက်တဲ့ အမှန်တရား နည်းနည်းတော့ ခါးမယ် ဖတ်ကြည့်… ယောင်္ကျားတွေတော်တော်များများက အများပျော်အောင် Facebook မှာဖြစ်ဖြစ် အပြင်မှာ သူငယ်ချင်းဆုံရင်ဖြစ်ဖြစ် လုလုအောင်ဟေ့ !!! မအေးသောင်းဟေ့ !!!စသဖြင့် ရီစရာတွေရေးတင် ဟာသတွေလုပ်ပြီး Troll နေကြတာ… တကယ့်အပြင်လောကမှာတော့ လုလုအောင် မအေးသောင်း ဆိုရင် ဘယ်ကောင်မှ ဘာမှကို မခံစားရတာဗျ။ (တကယ်ပြောတာ ဘာမှကို မခံစားရပါ) …
ရာသီခွင်အလိုက် အချစ်ရေးပြဿနာများ အပြည့်အစုံကို အောက်တွင် ရုပ်သံဖိုင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ခရက်ဒစ် ဗွီဒီယို ရာသီခွင်အလိုက် အချစ်ရေးပြဿနာများ အပြည့်အစုံကို အောက်တွင် ရုပ်သံဖိုင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ခရက်ဒစ် ဗွီဒီယို ရာသီခွင်အလိုက် အချစ်ရေးပြဿနာများ အပြည့်အစုံကို အောက်တွင် ရုပ်သံဖိုင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ခရက်ဒစ် ဗွီဒီယို ရာသီခွင်အလိုက် အချစ်ရေးပြဿနာများ အပြည့်အစုံကို အောက်တွင် ရုပ်သံဖိုင် ဖော်ပြထားပါသည်။ …
“ရာမ” ဟာ “မယ်သီတာ” ကို တကယ် ချစ်ခဲ့တာလား??? ရာမမင်းသားဟာ မယ်သီတာကို ဘယ်တုန်းကမှ မချစ်ခဲ့ဖူးပါ ကျွန်တော် အခုလို ပြောလိုက်လို့ ကျွန်တော့်ကို ဆရာချစ်ဦးညိုရဲ့ လင်္ကာဒီပချစ်သူစာအုပ် လွှမ်းမိုးမှုကို ခံနေရသူတစ်ဦးလို့ သမုတ်ရင်လည်း ကျွန်တော် မငြင်းပါဘူး ဒါပေမဲ့ အဓိက ပြောချင်တာက ရာမမင်းသားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောချင်တာပါ ကျွန်တော် မြင်ထားတဲ့ အမြင်လေးတစ်ခုပေါ့ …
တချို့လူတွေရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ သစ္စာတရားက တည်မြဲလွန်းလို့ ကို ကံတရားကြီးကတောင် သဝန်တိုမိသွားတယ်ထင်ပါရဲ့…😥😥 ပရိတ်သတ်ကြီးရေ ချစ်ခြင်း မေတ္တာတရားက တော်တော်ကိုထူးဆန်းတယ် ထင်ပါရဲ့။ ကောင်လေး နဲ့ ကောင်မလေးက အရမ်းချစ်ကြပြီး သစ္စာရှိနေတဲ့ ချစ်သူ စုံတွဲတွေကျတော့ ကံတရားက မနာလိုတယ်။ ကောင်လေးအရမ်းချစ်နေတော့ ကောင်မလေးက ဖောက်ပြန်တယ်. ကောင်မလေးက အရမ်းချစ်နေတော့ ကောင်လေးက ဖောက်ပြန်တယ်။ တစ်ခါ နှစ်ယောက်လုံး …
သူ သငျ့ကို တကယျမခဈြပဲ အသုံးခရြုံသကျသကျ ကစားနတေယျဆိုတာ သိနိုငျတဲ့ အခကျြတှေ
သူ သငျ့ကို တကယျမခဈြပဲ အသုံးခရြုံသကျသကျ ကစားနတေယျဆိုတာ သိနိုငျတဲ့ အခကျြတှေ အချဈရေးဆိုတာ ရိုးရှငျးမလိုနဲ့ အတျောလေး ရှုပျထွေးတဲ့ အရာတစ်ခုပါနျော တစ်ခါတဈလမှော ကိုယျ့ရဲ့ အချဈတွဟော ဘယျလောက်ပဲ မှန်ကနျနပေါစေ တဈခြားသူအတွကျတော့ ကိုယျ့အချဈတွကေ ကစားစရာတစ်ခုသကျသကျသာ ဖြဈနတေတ်ပါတယျ။ ဒီအချကျတွကေ သူ သင့်ကို တကယ်မချစ်ပဲ အသုံးချရုံသကျသကျသာ ကစားနတေယ်ဆိုတာကို သိနိုင်ပါတယျ။ အခိနျအကွာကွီး ပျောကျနတေတ်တယျ …
တစ်လင်တစ်မယားစနစ်သာ ကျင့်သုံးတဲ့ အောက်ချင်းငှက်တို့၏ သစ္စာတရားကြီးမားပုံ
တစ်လင်တစ်မယားစနစ်သာ ကျင့်သုံးတဲ့ အောက်ချင်းငှက်တို့၏ သစ္စာတရားကြီးမားပုံ အောက်ချင်းငှက်တွေဟာ တစ်လင် တစ်မယား စနစ်ကျင့်သုံးကြတယ်။ အောက်ချင်းငှက်ထီးဟာ အောက်ချင်းငှက်မကို ယူမိတဲ့ အချိန်ကစပြီး သူကလည်း မဖောက်ပြန်ဘူး။ အောက်ချင်းငှက်မကိုလည်း အပြင်ပေးမထွက်တော့ဘူး။ အသိုက်ကို ရွှံ့နဲ့ ပိတ်ထားတယ်။ သူပဲ အစာရှာကျွေးတော့တယ်။ အောက်ချင်းငှက်မဟာလည်း ပိတ်ထားတဲ့ရွှံ့ကို သူကိုယ်တိုင် နှုတ်သီးနဲ့ ဖောက်ပြီးသွားလို့ရတယ်။ ယောကျားလုပ်ထားတာကို မဖျက်ဆီးဘူး။ ဘယ်လောက်ဗိုက်ဆာဆာ ယောက်ျားလာပြီး …